Careers | Vahaolana OMG
Ny bokotra antso vonjy maika ho an'ny vonjy maika, fakantsary miendrika vatan'ny polisy, GPS Tracking & Exit Pad Padarmy, Mpamatsy fakantsary miafina miafina - trano sy hopitaly
Whatsapp: Singapore + 658333-4466, Jakarta +62 81293-415255 (51 Ubi Ave 1 # 05-07A Haavo 7, S408933 - Misokatra: Mon-Sat: 10 am-6pm)
Fotoana mampientanentana ho an'ny orinasanay izany! Fiantsorohan'ny tanora High-Tech Singapore izahay izay manangana sy mivarotra Real Time Location Systems (RTLS) mankany amin'ny tsenan'ny fahasalamana. Manara-maso ny fitaovana sy ny olona amin'ny fotoana iainana isika. Ny rafi-pandambenay dia miasa any amin'ny hopitaly manerantany 100. Tanora, tanora manana orinasam-pifandraisana maivana izahay miaraka amin'ny tontolo iainana feno hafanam-po, mahafinaritra sy mahazatra.
Amin'izao fotoana izao dia mikatsaka olona iray tena mamirapiratra isika, izay matihanina, matihanina, matihanina, mahafinaritra ary manolo-tena amin'ny fahafahana mialoha. Ny OMG Solutions dia manome valisoa ho an'ny tombontsoa manokana amin'ny fikatsahana ny tanjontsika mahazatra ary manaja ny maha-olona sy ny fahasamihafana ara-tsaina, ara-tsaina ary ara-kolontsain'ny ekipantsika. Ny kolotsaintsika dia namela antsika hanintona sy hitazona ireo olona manan-talenta izay tarihin'ny fahitana momba ny fomba hanovantsika ny fampiharana ny fitsaboana.
21909 Total Views 23 Views Today
OMG Solutions - Nomena Nomenao Singapore 500 Enterprise 2018 / 2019
(Takina amin'ny fanendrena)